SomaliTalk.com » Hay’ada Samafalka Haro oo Afurisay Barakacaal gaaraya Lixboqol oo ruux
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Wednesday, August 1, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Dhagayso dadka la afuriyey oo ka hadlaya baahida ay u qabeen afurka loosameeyey, una ducaynaya cidkasta oo qayb ka qaadatay
Ha’ayda Haro oo ah Hay’ad ka howl gasha geeska Africa, ayaa waxay qiimayn kusoo sameeyeen dhowaan Gobolka banaadir, halkaas oo ay kusoo arkeen dhibaato lixaad leh, sida uu waraysigiisa ku sheegay Xasan Dhooye oo ah Agaasimaha Haro, mar uu ka sheekaynayey safar ay isaga iyo Sh. C/raxaan Muqdiso ku gaareen, warbixintaas oo ahayd warbixin naxdin leh, ayaa waxaad loogu soo celceliyey TV-yada iyo idaacadaha Maraykanka, iyadoo ay lasocoto sawiro ay ka muuqato dhibaatada dadka haysata, Hay’ada Haro ayaa isu taagtay in baahidaad ay wuxuun kala tacaasho, waxayna bilowday laba barnaamij, Afurinta dadka dhibaataysan iyo in Baco loo helo dadka roobka ay ka galaan.
Dadka Maraykanka ayaa fariintaas jawaab bilow ah ka bixiyey,waxayna Ha’ayda Haro illaahay fadligiis iyo dadka wax sadaqaystay kadib bilowday Afurinta maalinkasta 600 oo qof, kuwaasoo ka kooban Indhoola yaal iyo dad aad u tabar dar, dhaqaalahaas bilowga ahna waxaa tabarucay in yar oo kamid ah Jaaliyada Maraykanka.
Halkaan ka dhagayso kana daawo dadkii oo la afurinayo iyo sida ay u arkaan.
Fariinta Hay’ada Haro Masuulkeeda Xasan Dhooye ku celcelinayo ahaa ah;
1- In dadkaan dhibaataysan loo gurmado oo barnaamijkaan afurinta laga qayb qaato.Qofkiina bishii waxaa afuriya $60
2- In Zakaatul Fitriga lagu soo hagaajiyo Ha’ada HARO inta bishu dhamaan si dadkaas dhibaataysan loo gaarsiiyo
3- In dadkaas dhibaataysan loo helo baco ay Roobka ka galaan.
4- Sidoo kale Maalinta Sabtida ah waxaa shir isugu jira afur iyo Barnaamij lagu qaban doonaa Maqaayada Safaari dhamaana waa lagu casumayaa dadka reer Minnesota.Faah faahin fadlan Flayerka Akhri. http://harousa.org/?p=1130
Daawo Socdaalkii Sh. C/raxmaan iyo Xasan Dhooye ee Soomaaliya
Waxaad kala soo xiriiri kartaa Ha’ada HARO wardoon iyo waxbixinba cinwaanadan hoose;
Sawiro dheeraad ah fadlan boowo www.harousa.org
Face book: Haro EastAfrica